Qeybinta Warshadaha, Qeybiyeyaasha - Soosaarayaasha Golaha Wasiirada Shiinaha
Taxanaha ZBW (XWB) ee AC noocyada sanaadiiqda waxay isku daraan qalabka korontada ku shaqeeya, kuwa wax kala wareejiya, iyo qalabka korontada oo hooseeya oo kujira isugeyn dhameystiran oo qalab qeybinta awooda ah, oo loo adeegsado dhismooyinka dhaadheer ee magaalooyinka, magaalooyinka iyo miyiga. dhismayaasha, guryaha la deggan yahay, aagagga horumarinta farsamada sare, Dhirta yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, miinooyinka, goobaha saliida, iyo goobaha dhismaha ku meel gaarka ah waxaa loo isticmaalaa in lagu soo helo laguna qaybiyo tamarta korantada nidaamka awood qeybinta.
GGD AC Golaha Wasiiradda Qaybinta Awoodda Hoose
GGD AC golaha tamarta yar-yar ee qaybinta tamarta ayaa ku habboon dadka isticmaala tamarta sida dhirta korontada, saldhigyada, shirkadaha warshadaha iyo kuwa kale ee isticmaala korontada sida AC 50HZ, oo lagu qiimeeyo danab shaqeynaya 380V, oo hadda lagu qiimeeyay nidaamka awood qeybinta 3150A sida awooda, nalalka iyo qalabka badalashada awooda , Qaybinta iyo xakamaynta. Wax soo saarku wuxuu leeyahay awood jabis sare, oo lagu qiimeeyay waqti-gaaban oo u adkeysan kara illaa hadda 50KAa, nidaamka wareegga wareegga ah, isku-dhafka habboon, ku-dhaqanka xooggan, iyo qaab-dhismeedka cusub.
MNS- (MLS) Nooca Beddelaha Danab Yar
Nooca MNS nalka hoose ee danab hooseeya (oo hadda kadib loogu yeero danjiraha hoose ee danab) waa badeecad ay shirkadeennu isku darayso isbeddelka horumarka ee dalkeenna danab hooseeya, wuxuu hagaajinayaa xulashada qaybaha korantadiisa iyo qaab-dhismeedka golaha wasiirrada, iyo dib-u-diiwaangelinta Qalabka korantada iyo farsamada badeecada waxay si buuxda u buuxinayaan shuruudaha farsamo ee badeecada asalka ah ee MNS.
GCK, GCL danab hoose oo lagala noqon karo Switchgear
GCK, taxane GCL danab hoose oo lagala bixi karo qalabka wax lagu beddelo waxaa loogu talagalay shirkadeena iyadoo loo eegayo baahida isticmaalayaasha. Waxay leedahay astaamaha qaabdhismeedka horumarsan, muuqaalka quruxda badan, waxqabadka korantada ee sarreeya, heerka ilaalinta sare, nabadgelyada iyo isku halaynta, iyo dayactirka habboon. Waxaa loo isticmaalaa warshadaha birta, batroolka iyo warshadaha kiimikada. Waa qalab ku habboon qaybinta tamarta nidaamyada tamarta-hooseeya ee korantada ee warshadaha sida korontada, mashiinnada, dharka iyo wixii la mid ah. Waxay ku qoran tahay sheyga lagu taliyey ee isbeddelka labada shabakadood iyo dufcaddii sagaalaad ee alaabooyinka tamarta badbaadiya.